XOG RASMI AH+AKHRISO: Yaa hogaamin doona Wafdiga Soomaalida ee aadaya Shirka LONDON, Dawlad gobaleedyadase yaa ka qeybgalaya? | PuntlandTimes- Wararkii ugu dambeeyey Puntland iyo Somalia
XOG RASMI AH+AKHRISO: Yaa hogaamin doona Wafdiga Soomaalida ee aadaya Shirka LONDON, Dawlad gobaleedyadase yaa ka qeybgalaya?
MUQDISHO(P-TIMES)- Hogaamiyaasha Madasha Wadatashiga ee Soomaalida ayaa isku raacay go’aamo ku saabsan shirka London ee looga hadli doono arrimaha Soomaaliya, waxaana la go’aansaday sidda loo qeybsanayo Ergada ka qeybgalaysa.
Wafdiga tagaya shirka London waxaa hogaamin doona Madaxweynaha dawladda Faderaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, isagoo ay la socdaan in ka badan 15 qof oo ay ku jiraan dawlad gobaleedyada.
Madaxweynayaasha dawlad gobaleedyada ayaa tagi doona, waxaana mid kasta laga rabaa in labo xubnood ay ku wehliyaan safarkan, kuwaas oo kala qeybgalaya shirka LONDON.
Qorshaha shirkan la horgeynayo waxaa lagu wareejinayaa Madaxweynaha Soomaaliya oo isagu shir gudoominaya kulankan, iyadoo ay goob-joog noqon doonaan xubno muhiim ah.
Dawlad gobaleedyada waxyaabaha ay rabaan waxaa lagu wareejinayaa Madaxda Dawladda Faderaalka, waxaana qorshuhu yahay in hal mawqif lala tago shirkan.
Dawladda Ingiriiska ayaa casuntay dawlad gobaleedyada oo dhan, iyadoo uu qorshaheedu ahaa in qorshe gaar ah mid kasta oo Soomaali ah la tago, taas oo ka dhigan in aysan marnaba aqbali doonin wadajir Ummadda Soomaaliyeed, laakiin waxaa diiday dawladda Faderaalka.
Qorshe mideysan ayay dhinacyadu la tagi doonaan Shirka UK, waxayna tani muujinaysaa rajada laga qabi karro soo laabashada magacii & Sumcadii Ummadda Soomaaliyeed oo uu balan qaaday Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.